संसारभर कोरोना संक्रमणको यस्तो छ पछिल्लो अवस्था…. – Ramro Samachar
संसारभर कोरोना संक्रमणको यस्तो छ पछिल्लो अवस्था….
By राम्रो समाचार	 On Dec 1, 2020 181 0
काठमाडौं : विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ६ करोड ३६ लाख ७ हजार पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ५ करोड २४ लाख नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । यस्तै, मृत्यु हुनेको संख्या पनि १४ लाख ७४ हजार २१३ पुगेको छ । हालसम्म ४ करोड ४० लाख भन्दा धेरै उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या १ करोड ३९ लाख २० हजार पुगेको छ । यहाँ हालसम्म २ लाख ७४ हजार ३३२ हजार जनाको मृत्यु भएको छ ।
भारतमा हालसम्म ९४ लाख ६३ हजार २५४ संक्रमित हुँदा १ लाख ३७ हजार ६५९ जनाको मृत्यु भएको छ । ब्राजिलमा हालसम्म ६३ लाख ३६ हजार २७८ जना संक्रमित हुँदा १ लाख ७३ हजार १६५ जनाको मृत्यु भएको छ । रुसमा २२ लाख ९५ हजार ६५४ संक्रमित हुँदा ३९ हजार ८९५ जनाको मृत्यु भएको छ । फ्रान्समा २२ लाख २२ हजार ४८८ संक्रमित हुँदा ५२ हजार ७३१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
स्पेनमा संक्रमितको संख्या १६ लाख ६४ हजार ९४५ पुगेको छ भने ४५ हजार ६९ जनाको मृत्यु भएको छ । बेलायतमा हालसम्म १६ लाख २९ हजार ६५७ जना संक्रमित रहेका छन् ५८ हजार ४४८ जनाको मृत्यु भएको छ । यता, इटलीमा १६ लाख १ हजार ५५४ जना संक्रमित हुँदा ५५ हजार ५७६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
अर्जेन्टिनामा १४ लाख २४ हजार ५३३ जना संक्रमित हुँदा ३८ हजार ७३० जनाको मृत्यु भएको छ । कोलम्बियामा १३ लाख १६ हजार ८०६ संक्रमित हुँदा ३६ हजार ७६६ जनाको मृत्य भएको छ । नेपालमा भने अहिलेसम्म २ लाख ३३ हजार ४५२ जना संक्रमति फेला पर्दा २ लाख १४ हजार ५२१ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
१५ सय ८ जनाको भने मृत्यु भएको छ । यता, कोरोना संक्रमणको सुरुवात भएको चीनमा पछिल्लो २४ घण्टामा १२ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । त्यहाँ हालसम्म ८६ हजार ५४२ जना संक्रमित हुँदा मृतकको संख्या ४ हजार ६३४ छ ।
माउण्टेन इनर्जीको आइपीओ बुधबार बाँडफाँट हुँदै….
चीनले गर्‍यो एन्टी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रणालीको परीक्षण, अमेरिका र भारतलाई…
अर्थमन्त्री द्वारा राजीनामा